Amin’ny androntsika, ny vola, ny Olana dia somary ao amin’ny sokajy, dia efa akaiky, ary zara raha resahina mihetsika, na dia teo anivon ny fianakaviany. Tsy misy afa-tsy ho ketraka ny Mpivady, na dia, raha ny tena izy, eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy, ny ara-bola rehetra fanontaniana tokony miresaka, ny soso-kevitr’izy rehetra ny mahay manavaka. Amin’ny Ankapobeny, ao amin’ny fianakaviana izay na ny vady asa, na ahoana na ahoana, ny iray tamin’izy ireo mahazo kokoa noho ny hafa, ary izany no heverina ho tena ara-dalàna. Ary tsy misy olona mino fa izy no mitondra ny enta-mavesatra ny manome ny maro an’isa amin’ny enta-mavesatra ny Fianakaviana.
Inona avy ireo antony mahatonga ny maro ny ady sy ny ratsy ny miahiahy fa ny iray amin’ireo mpivady mitondra ny fianakaviana manontolo, ny hafa mety ho ilaina ny fandaniana, izay ihany ny mifandray amin’ny tena manokana Zavatra ilaina, ny zavatra ilain ny fianakaviany. Eo amin’ny lafiny ara-nofo ny fiainam-pianakaviana dia dingana iray amin ny famongorana ny fifandraisana dia ilaina ny voalohany mamaritra mazava tsara ny fomba fitantanam-Bola ny fianakaviana. Ny vola sy ny teti-bolan’ny fianakaviana dia ilaina ny ampahany amin’ny fiainana fa isika dia miatrika isan’andro, ary izany no tsy ara-dalàna amin’ny fiainana izay azo atao. Hita ao amin’ny fianakaviana ny vola, indrindra fa ny mahavariana dia be, ny Fiheverana ny fandeferana sy ny fanaraha-maso tanteraka ny lafiny rehetra amin’ny fiainana ny tontolo iainana afaka mamorona. Izany dia zara raha mahatonga ny ankamaroan’ny fikorontanana, ny mora tezitra, sy ny vokatr’izany matetika fisaraham-panambadiana. Araka ny psikology, ny vola dia tsy, ny fahatelo dia ilaina eo amin’ny fifandraisana, ny mpiara-miasa tsy maintsy mianatra koa hahavita izany miara. Marina indrindra izany ho an’ny olona izay ampiasaina alohan’ny fanambadiana sy ny tsy miankina ny fiainana dia, ary dia, izay tiany ny vola, na ny mifanohitra amin’izany, ny teo aloha tsy nanao sarotra iray.
Ara-bola ny fifandirana mety hahatonga ny antony isan-karazany
Izany dia mety ho vokatry ny zava-misy fa voafetra ny isan’ny ara-bola ny Olona eo ambany ny adin-Tsaina, sy hanipy ny ratsy rehetra fihetseham-po fa rehefa mandeha ny fotoana efa voangony tao amin’ny toetry ny marary-heverina ho toy ny fandaniana, indrindra fa raha izany dia tsy ilaina ny fanazavany. Amin’ny tranga izay ny fianakaviany fidiram-bola tsy mety ho kely na be, ary tsy foana ny rariny ilaina, izay, kosa, dia mampitombo ny vola lany, ary ny vokany dia ny fanafintohinana dia niantso indray. Maro ireo toe-javatra izay noho ny kofehy ireny-eny amin’ny vola, ny Mpivady efa nanapa-kevitra ny fisaraham-panambadiana, sy ny ampahany lehibe amin’ny fisaraham-panambadiana fitsarana, ny fizarana ny fananana iombonana, dia tonga ny zava-misy fa afaka volana vitsivitsy iombonana napetraka, na napetraka ny Cutlery. Noho izany, ny fananganana teti-bola ny fianakaviana no mitantana anao ny fahafahana misoroka ny tsy nandany, ka noho izany ny fahafahana ara-Bola tsy misy nenina. Raha toa ianao ka, ho toy izany toa, ary mba hahazoana tsara ny vola, fa ny vola tsy ampy foana, ka ny toe-Draharaha tsy mifanaraka amin’ny zava-misy, na fotsiny ianao tsy afaka ny fanaraha-maso ny fandaniana. Indrindra fa izany dia ilaina ny maso, raha ny fandehany fa ho mandany bebe kokoa noho ianao mahazo, amin’ny fampiasana sary nahazoan-cards, ary hilentika amin’ny trosa. Izany Toe-javatra mety, raha mbola samy mpivady dia miaina, ary izy ireo dia mbola afa-po. Fa amin’ny Ankapobeny, dia tsy fahita firy sy ny fiainany amin’ny fomba lehibe, ary ny faharoa dia miezaka ny zavatra rehetra mba hanavotana ny zavatra azonao atao. Vokatry ny ezaka ataony, amin’ny tsara indrindra, dia nihena ho aotra, ary amin’ny tranga ratsy indrindra, ratsy. Amin’ny Ankapobeny, ny Tsy fisian’ny Fanahy vola fiandry, ary ny sasany manome antoka ny ho avy, ara-toekarena Mpiara-miasa mandrakariva eo ambany ny adin-Tsaina, izay mazava tsara ao amin’ny ny fitondran-tena, ny fianakaviana ny fifandraisana, sy ny Ankapobeny fahatsapana ny fianakaviana. Amin’ity tranga ity, ny tsara indrindra Safidy dia ho wasteful Ny fanabeazana ny vady iray ho fahazarana ny hijery ny vola lany. Noho izany antony izany, ny fifanarahana manokana misy eo amin’ny mpiara-miombon’antoka adapts ny. Raha tsy afa-po, ary manohy ny fandaniana, dia tsara kokoa mba hanomezana fotoana, ny fahafahana, sy ny fianakaviana ny vola kokoa amin’ny mpiara-miombon’antoka ara-toekarena. Marina indrindra izany ho an’ny tanora mpivady, ny teo aloha ny vola nahavita amin’ny manokana, dia voafetra ny famatsiam-bola, na ny an’ny vondrona sosialy maro samihafa. Raha ny fianakaviana no lasa tany am-boalohany, fa misy fiovana eo amin’ny ara-bola ampy fanononana tsy ampy, izany no ilaina fa ity toe-Draharaha ity raha jerena ifotony. Farany, ny tsara indrindra Safidy dia tsy, raha ny fianakaviana ny sy ny ary ny vola entina any an-trano ny vola ho an’ny mizara matetika.
Ny fanaovana ny teti-bolan’ny fianakaviana dia ilaina ny resaka sy mba hiresaka momba
Raha te-mirindra ny fanambadiana, ny fitokisana fotsiny amin’ny ity lohahevitra ity dia ilaina. Miara, ireo hisafidy ho an’ny tenany ny lisitry ny vola lany raha ny tokony ho izy amin’ny fotoana sasany hitranga.
Avy eo dia, mifidy ny fandaniana ilaina, izay afaka ny tsy ho voafafa
Ohatra, ny fitaovam-pandraisana afaka andro, ny fandoavana ny akanin-jaza, ny findramam-bola amin’ny vola, ny vidin’ny lasantsy, ny sakafo, teo aloha dia fantatra ny zava-mitranga na ny fankalazana, sy ny maro hafa. Manaraka, ny antsoina hoe vola fanampiny, dia afaka manam-bola ny mamaritra, fa izy ireo dia tsy maharitra, toy ny fividianana ny fitafy, tokantrano fitaovana, fanaka. Aorian’ny fizarana ny fototra sy ny vola fanampiny ianao, dia afaka mijanona ho an’ny sasany vola maimaim-poana. Ny vola tsy mihetsika, tsy misy nenina momba ny kely haitraitra, mba mandany ny fianakaviana iray fialan-tsasatra, na ny lehibe fividianana. Mba fanaraha-maso ny vola fanampiny, dia afaka ny boky, ny Fitoviana any an-trano, izay firaketana an-tsoratra ny vola rehetra nandeha. Noho izany dia afaka mora foana Podometer ny habetsaky ny fako, mampitaha azy amin’ny vola miditra ary ho afaka hanafoana ny tsy ilaina amin’ny fividianana. Amin’ny soso-kevitra tsotra momba ireo olana toy ny fianakaviana ny fitantanam-bola, namaly, dia mianatra haingana mba hiaina ao amin’ny fomba, ary tsy ny fihetseham-po na inona na inona fandikana, na, ao tafahoatra fahampian ny zavatra iray. Ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe tsy manana faniriana handray ny dingana ny Fivoriana sy ny hanova ny fahazarana, satria io fanapahan-kevitra io dia afaka manana ny hoavin’ny fifandraisana ao amin’ny fianakaviana, ny faharetan ny azo antoka sy fanambinana ho nahantona teo. Aza mametraka ny vola amin’ny zava-drehetra, satria eo amin’ny fiainana dia misy be dia be ny zava-tsarobidy, izay tsy mandoa vola misy ny Banky-tsoratra
← Mampiaraka an-tserasera ho maimaim-poana
Tokana fifanakalozana entana any ETAZONIA: Fiarahana amin'ny Aterineto avy any Amerika →